Maxaad Ka Taqaan Maxamed Bin Salmaan? Awoodda Ka Dambeysa Taajka Boqortooyada Sucuudiga – somalilandtoday.com
Maxaad Ka Taqaan Maxamed Bin Salmaan? Awoodda Ka Dambeysa Taajka Boqortooyada Sucuudiga
(SLT-Riyadh)-Marka la eego Sacuudiga dibaddiisa, dad kooban ayaa yaqaannay magaca Maxamed Bin Salman Aala Sucuud, ka hor inta uusan aabihiis boqorka noqonin sannadkii 2015-kii. Balse hadda, 33 jirkan dhaxal sugaha boqortooyada ah waxaa loo aqoonsan yahay inuu yahay qofka rasmiga ah ee gacanta ku haya maamulka waddanka dhoofiya saliidda ugu badan ee caalamka.
Lahaanshaha sawirkaREUTERSImage captionHoteelkan oo ah mid loogu tala galay raaxada waxaa bilooyin ku xirnaa amiirro uu Maxamed Bin Salmaan xarigooda amray
Lahaanshaha sawirkaREUTERSImage captionAmiir Al Waliid bin Talaal wuxuu ka mid yahay dadka fara ku tiriska ah ee dunida ugu hodansan, sawirkanna waxaa laga qaaday isagoo ku xiran hotelka Ritz Carlton.
Maxamed Bin Nayef ayaa markaas ahaa qofka ugu haboon ee mudnaanta ku leh taajka.
Lahaanshaha sawirkaEVNImage captionDumarka Sacuudiga ayuu MBS u ogolaaday in la siiyo laysinka wadidda baabuurta
Lahaanshaha sawirkaREUTERSImage captionMBS waxaa lagu eedeeyaa inuu horseed ka noqday duullaanka lagu qaaday Yemen
Image captionMBS wuxuu ogolaaday in Shineemooyin laga furo Sacuudiga
Lahaanshaha sawirkaAFPImage captionDilka Jamaal Khaashuqji ayaa bar madow ku noqday sumcadda MBS